ဘီယာ - မှတ်စုစာအုပ်
ဘီယာသည် ပထမဆုံးအရက်ပါသော အဖျော်ယမကာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ ပထမဆုံး ဘီယာ မည်သူစတင် သောက်ခဲ့သည်ကိုမူ မသိရှိပေ။ သမိုင်းပညာရှင်များက လူသားများသည် ဘီယာနှင့်တခြားယမကာများကို နှစ်ခြိုက်ခဲ့ကြကြောင်း ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ ဂျုံ၊ စပါးစသည့် နှံစားပင်နှင့် ရေကိုအသုံးပြု၍ ပေါင်မုန့်မထုတ်လုပ်နိုင်ခင် ပထမဆုံးဘီယာကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ် အမျိုးမျိုးပေါ်ထွက် လာပြီးနောက် အသုံးပြုသည့် နှံစားပင်လည်း ကွာခြားခဲ့သည်။ ဘီယာ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အာဖရိကလူမျိုးများက လူး၊ ဆပ်၊ နှံစားပြောင်း၊ ပီလောပီနံ ကို အသုံးပြုကြသည်။ တရုတ် လူမျိုးများကမူ ဂျုံကိုအသုံးပြုကာ ဂျပန် လူမျိုးများက ဆန်ကိုအသုံးပြုကြသည်။ အီဂျစ်လူမျိုးများက ဘာလီစေ့ကိုအသုံးပြုကြပြီး၊ ယနေ့ခေတ်ဘီယာထုတ်လုပ်ရာတွင် အဓိက အသုံးပြုသောဗျစ်ပန်း (Hop) များ ကိုမူ အေဒီ ၁,၀၀၀ တိုင် အောင်အသုံးမပြုပေ။ ယနေ့ခေတ် ဘီယာချက်လုပ်ရာတွင် ခေတ်မီနည်းစနစ်များ ဖြင့်ချက်လုပ်ကာ အလိုအလျောက် ပုလင်းထဲထည့်ခြင်း၊ ပိုးသတ်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်သည်။ Kruger Cream Ale တံဆိပ် ပထမဆုံး ဘီယာဘူးများကို ၁၉၃၅ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ၂၄ရက်က Kruger Brewing ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်ရောင်း ချခဲ့ကြသည်။
ဘီယာ (beer) ဟာ စားသောက်ကုန် တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော. ကမ္ဘာမှာ ကျယ်ပြန်.စွာသုံးစွဲ နေကြတဲ. စားသောက်ကုန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ.သော နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ပေါ်ပေါက်ခဲ.တယ် လို. ယူဆကြပါတယ်။အယ်လကို ဟော ပါဝင်တဲ. အဖျော်ယမကာတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာမှာ ရေနဲ. လက်ဖက်ရည် ပြီးရင် တတိယမြောက် အသုံးပြုဆုံး စားသောက်ကုန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘီယာမှာ အယ်ကိုဟော ပါဝင်နူံး volume4ကနေ7ထိ ထည်.သွင်းထားလေ.ရှိပါတယ်။
ဘီယာဟာကမ္ဘာ မှာ ရှေးအကျဆုံး အဖျော်ယမကာ ဖြစ်ပြီး ဘီယာကို ခရစ်တော်မပေါ်မီ နှစ်ပေါင်း ၉၅၀၀ လောက်က လယ်ထဲက ကောက်နှံပင် ကနေ စတင်တွေ.ရှိခဲ.တယ်လို. ဆိုပါတယ်။ဓါတ်တုဗေဒ သက်သေခံကို တော. ခရစ်တော်မပေါ်မီနှစ်ပေါင်း ၃၁၀၀ လောက်မှ တွေ.ရှိခဲ.တယ်လို.ဆိုပါတယ်။
ယနေ.မှာတော. ဘီယာထုတ်လုပ်ရေးကို စီးပွါးရေး တစ်ခုအနေနဲ.လုပ်ဆောင်ကြပြီးတော. ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို ဖြန်.ဖြူးရောင်းချနေကြပါတယ်။၂၀၀၆ ခုနှစ် မှာ တစ်နှစ် ဘီယာ ရောင်းရနူံး အရေအတွက် ဟာ လီတာ
သန်းပေါင်း ၁၃၃ သန်း (ဂါလံ သန်းပေါင်း ၃၅ )ထိ ရောင်းချခဲ.ရတယ်လို.သိရပါတယ်။